Halabuurka iyo dirka qalabka qodan la taaban karo - Shiinaha Shandong QianBaidu
Halabuurka iyo dirka qalabka qodan la taaban karo
Qaab dhismeedka geedka qodan la taaban karo
qalab qodan la taaban karo waa cement, celcelis ahaan, biyaha, shaydi, shaydi iyo qalabka kale ee waafaqsan shuruudaha cabirka ratio la taaban karo, ka dibna kiciyey galay go'an la taaban karo fiicni qalabka, inta badan loo yaqaano sida geedka qodan la taaban karo (dabaqa). qalab qodan la taaban karo inta badan by qalab wax ka qabashada ah, qalabka qalabka lagu kaydiyo, qalabka lagu qiyaaso, la isku qasin qalabka iyo Hab kontaroolo iyo qaybaha kale. Oo ay ku jiraan qalabka, celcelis ahaan, sibidhka, shaydi, biyo, lagu daro iyo wixii la mid ah.
Qoondaynta oo ah qalab isku dhafka la taaban karo
(A) by soocidda dhaqdhaqaaqa
1. saldhigga qodan Mobile
Idaacadda qodan Tani waxay badanaa la qalab socodka ah, ayaa loo gudbin karaa wakhti kasta, dhaqdhaqaaqa waa wanaagsan yahay. Ugu badnaan ku habboon qaar ka mid ah mashaariicda ku meel gaar ah ama heer sare ah mobile, sida waddooyinka, buundooyinka iyo wixii la mid ah.
2. guushii weyneyd ee saldhiga la isku qasin
Warshad qodan Tan waxaa lagu soo shiriyey ka dhowr qaybood oo waaweyn, in la soo ururay oo karo iyo disassembled in wakhti yar oo gaaban, la kala iibsiga ee goobta dhismaha. Inta badan loo isticmaalo warshadaha la taaban karo ganacsiga iyo dhismaha la taaban karo oo waaweyn oo dhexdhexaad ah.
3. go'an dabaqa isku qasin
Tani waa warshad weyn oo la taaban karo qodan leh awoodda wax soo saarka ballaaran, oo inta badan loo isticmaalo warshadaha la taaban karo ganacsi, warshad prefabricated waaweyn iyo goobta dhismaha seeraha biyaha.
(B) waafaqsan soocidda habka wax soo saarka
qalab qodan la taaban karo sida ay khariidad ee ay technology waxa loo qaybin karaa hal-yada iyo double-yada laba qaybood.
(C) Hababka kale soocidda
qalab qodan la taaban karo marka lagu daro kor ku xusan laba nooc oo ah hababka caadi ahaan loo isticmaalo ee kala soocidda, laakiin sidoo kale sida in qaabeynta ee isku qasin qalabka iyo dar biyo isku qasin galay saldhigga wax batching qalalan iyo saldhigga qodan qoyan, sida reserved quudinta joogto ah qalabka la isku qasin wuxuu u qaybsan yahay saldhigga qodan joogto ah iyo saldhigga qodan Faraqa.
waqti Post: Feb-08-2018